‘अब सात करोड पर्ने मूर्ति’ - संवाद - नेपाल
‘अब सात करोड पर्ने मूर्ति’
सुन्दरी नग्मा श्रेष्ठको शिर बडो आकर्षक र अनौठो छत्रे आकारको मण्डलाले ढाकिएको थियो, १५ कात्तिकमा । मिस नेपाल २०१२ मा ‘मिस अर्थ’ उपाधि जितेकी नग्मा मण्डलाले मज्जाले खुलेकी थिइन् । यही पहिरन लगाएर नग्माले अमेरिकाको लस भेगासमा हुने मिस युनिभर्समा नेपालको प्रतिनिधित्व गर्नेछिन् । मण्डला लगाउँदा चित्ताकर्षक देखिएकी नग्माको धेरैले प्रशंसा गरे । यति अद्भुत शैलीको मण्डला पहिरन डिजाइन गर्ने ३५ वर्षे मूर्तिकार विजय महर्जन थिए, जो आफ्नै सिर्जनाको छायामा परेझैँ भए । यही सेरोफेरोमा मूर्तिकार महर्जनसँगको कुराकानी :
यति गज्जबको मण्डला बनाउनुभयो तर बनाउनेको भन्दा पहिरिनेको बढी चर्चा भयो नि ?
यसमा मलाई गुनासो छैन । सिर्जनाका सबै क्षेत्रमा यो स्वाभाविक हो । गीत लेख्नेभन्दा गाउने हिट भएजस्तै हो, यो ।
यो मण्डलाको अर्थचाहिँ के हो ?
मण्डलालाई हिन्दु धर्ममा धनकी देवी लक्ष्मी र तिब्बती बुद्ध धर्ममा धनकी देवी वसुन्धरा भनिन्छ । मण्डला तान्त्रिक विधिमा बनाइएको हुन्छ । मैले पनि त्यही विधिमा बनाएको हुँ । यसका आठवटा तह हुन्छन् र केन्द्रको तहमा पुगेर देवताको पूजा गरिन्छ । धर्म मात्रै नभई ब्रह्माण्डीय शक्ति लिन यसको पूजा गरिन्छ ।
धार्मिक र अध्यात्मिक रूपमा यति गहन चीजलाई शिरमा लगाउने पहिरन बनाउनुको खास कारण के हो ?
हो, सामान्यत: यसलाई भुइँ वा पर्खालमा सजाएर राखिन्छ । भगवान् को स्थान शिरमा हुने भएकाले मलाईचाहिँ यसको सही ठाउँ शिर लाग्यो । भगवान्लाई सम्मान गरेको सन्देश हो, यो ।
यो तयार गर्न कति समय लाग्यो ?
सुरुमा यो खोकना (ललितपुर)का एक जना मूर्तिकारले डिजाइन गरेका थिए । मलाई मन परेकाले त्यो मैले लिएँ र आफ्नो शिल्प प्रयोग गरेँ । यो बनाउन पूरै ६ महिना लाग्यो ।
अनि कतिमा बेच्नुभयो ?
देशको प्रतिनिधित्व भएको हुनाले पैसाको हिसाबकिताब भएको छैन ।
तपाईं मोडर्न आर्ट पढेको व्यक्ति, मूर्तिकलातिर कसरी लाग्नुभयो ?
हो, म पहिले अमेरिकी क्लासिकल मोडर्न आर्टतिर थिएँ । तर, पछि मलाई के लाग्यो भने कलाको प्राज्ञिक अध्ययन संसारभरि एकै किसिमले गरिन्छ । अवधारणा र सौन्दर्यशास्त्र मिसाएर संसारभरि पढाइ हुन्छ । यही बाटोबाट जाँदा संसारभरिका कलासँग नेपालीले प्रतिस्पर्धा गर्न कठिन देखेँ, भाषालगायतका कारणले । आफ्नो मौलिकपनमा मोडर्न शैली दिन सकेमा बेग्लै स्थान बनाउने सम्भावना देखेपछि देवी–देवताका मूर्तिकलातिर लागे ।
मूर्ति बनाउन मेसिन नै ल्याउन लाग्नुभएको थियो, ल्याइसक्नुभयो ?
यस्ता मेसिनबाट मूर्ति धेरै मात्रामा बनाउन सकिन्छ । र, त्यसलाई विश्वभरि फैलाउन सकिन्छ भनेर मैले मेसिन ल्याएको छु । तर, त्यसरी उत्पादन गरेको छैन । बजार अध्ययन गरेर मात्रै काम थाल्छु ।
तर, मेसिनबाट उत्पादन गर्न थालेपछि मौलिकपन मर्दैन र ?
अहिले पनि नेपालबाट चीन पुग्ने मूर्तिलाई चिनियाँहरूले त्यसरी ‘ कपी’ गरेर विश्वभर पुर्‍याएका छन् । हामी आफैँले त्यो काम गर्न सक्छौँ । पूजा गर्ने मूर्तिचाहिँ हातैले कुँदेर मौलिकपन बचाएरै यस्तो काम गर्न सकिन्छ ।
अबचाहिँ कसको मूर्ति बनाउने योजनामा हुनुहुन्छ ?
लोकेश्वर महादेवको बनाइरहेको छु ।
यसको खास विशेषता के हो नि ?
हिन्दु र बौद्ध दुवै देखिन सक्ने गरी मिसाएर बनाउँदैछु । तीन वर्षमा सक्ने लक्ष्य लिएको हो, एक वर्ष पूरा भइसक्यो । हीराजडित यो मूर्ति तयार गरिसक्दा सात करोड रुपियाँ मूल्य पर्ने अनुमान छ ।